Madaxweyne Trump oo kulan afur ah u sameeyey safiirada in kabadan 50 dal oo Islaamka – Radio Muqdisho
Madaxweyne Trump oo kulan afur ah u sameeyey safiirada in kabadan 50 dal oo Islaamka
Kulankan afurka ah oo ka dhacay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa soo qaban qaabiyay Madaxweynaha Maraykanka Donald Jey Trump,kaasi oo xalay loo qabtay diblomaasiyiin ka socda qaar ka mid ah safaaradaha dalalka Islaamka ee u fadhiya wadankaasi Mareykanka.
Kulankaasi ayaa waxaa goob joog ahaa safiirada in kabadan 50 dal oo kamid ah dowladaha Islaamka ee Dunida,kuwaasi oo la kulmay madaxweyne Donald Trump.
Warbaahinta Mareykanka ayaa hadal haysan in sanadkan aan kulankaasi sidii kuwii ka horeeyey looga wada qeybgalin,waxaa mas’uuliyiinta sare oo kulankaasi ka maqnaa kamid ah hogaamiyeyaal Muslimiinta Maraykanka ka tirsan oo lagu marti qaadi jiray ayna sanadkan ka soo qeyb galin,taasi oo ilaa iyo haatan aan la sheegin sababta.
Waxaa kamid ah danjirayaasha ka qeybgalay Sucuudiga,Imaaraadka,Masar,Ciraaq,Indonesiya,Baxreyn,Tunisiya,Boosniya,Asarbijaan,Gambia,Jordan iyo wadamo kale oo kamid ah dowladaha Caalamka Islaamka iyo qaar kamid ah hogaamiyaasha muslimiinta eek u dhaqan magaalada Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamaya in ujeedka uu yahay isku soo dhawaanshaha iyo laabxaarnaanta bulshada dhexedeedi ah.
Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa isagoo ka hadlayay arrimaha siyaasadda sheegay in uu ku faraxsan yahay in diplomaasiyiin qiimo badan uu afur ugu sameeyo Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka,wuxuuna ammaanay xoojinta xiriirka diblomaasi ee uu kala dhexeeyo wadamadaasi.
Akhriso:- Isku aadka wareegga 3aad ee tartanka oo caawa la sameeyay “SAWIRRO”
Ciidanka Xoogga Dalka oo ka hortagay weerar Maleeshiyada Shabaab ay ku soo qaadeen deynuunaay(DHAGEYSO)